कुरा क्रान्तिको, बाटो पलायन र विसर्जनको - Janabato
कथित ‘बहुमत’ शब्दले पलायनवादी चिन्तनलाई कति दिन लुकाउन सकिएला ?
२०७९ जेठ ३० गते सोमबार ०७:१६ मा प्रकाशित
२ हप्ता, ४ दिन, ६ घन्टा अगाडि
४८३ जनाले हेरिएको
केही समययता नेकपाबाट चोइटिएर बनेको नौजनाको समूह (नौमत) वा धर्मेन्द्र समूहले आफूलाई क्रान्तिकारी स्वघोषणा गर्दै नेकपामाथि भ्रमको खेती गरिरहेको छ । अहिले धर्मेन्द्र र सुदर्शन नेकपामा छैनन् । उनीहरु नेकपाबाट पदमुक्त समेत भइसकेका छन् । त्यसैले उनीहरुको स्वघोषित क्रान्तिकारिताप्रति कुनै टाउको दुखाइ छैन । त्यो समयले प्रष्ट पार्दै जाने छ ।
अहिले उनीहरु नेकपाको खेदो खन्ने र भ्रम छर्ने एकसूत्रीय अभियानमा लागिरहेका छन् । उनीहरुको यो अभियानलाई पार्टी अनुशासनमा कारवाहीमा परेका लठैटहरुले सघाइरहेका छन् । उनीहरुको विचार र कार्यशैली हेर्दा नेकपालाई ध्वस्त पार्नु नै जीवनको एकमात्र उद्देश्य हो । तर ती सबै काम कथित बहुमत (साँचो अर्थमा नौमत) हरुले क्रान्तिकारी आवरणमा गरिरहेका छन् ।
धर्मेन्द्र र सुदर्शनले कार्यकर्तालाई नेकपा र यसको नेतृत्वका विरुद्ध भड्काउन न्वारनदेखिको बल लगाउँदै आएका छन् । त्यसका लागि उनीहरुले स्थानीय चुनावबारे शिवगढी बैठकमा भएको बहसलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ; साथै कैयौँ काल्पनिक र झुटा आरोपको सहारा समेत लिइरहेका छन् ।
एकीकृत जनक्रान्तिका १२ जना महान सहिदहरुका बलिदानको जगमा निर्माण भएको इरातो खबर अनलाइनलाई दुरुपयोग गर्दै नेकपाविरुद्ध यस्ता बिषवमन गरिरहेका छन् । उनीहरुको यो चरित्र पलायन र विसर्जनवादको ओराली बाटो त झर्दै छ नै, अझ अवसरवादी, सिद्धान्तहीन र निम्नस्तरको छ । यस्तो सिद्धान्तहीन विचारको जगमा उभिएको धर्मेन्द्र समूहको यात्रा हिन्दमहासागरतिर यात्रारत छ । यो उनीहरुको नेकपामा हुँदा भन्दै आएको, गर्दै आएको र कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिँदै आएको आफ्नै वैचारिक मान्यताको पनि विपरीत छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने उनीहरुको विचारले १८० डिग्री फन्को मारिसकेको छ । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, यो उनीहरुको स्पष्ट रूपमा वैचारिक स्खलन हो । यस्तो निर्लज्ज कार्यलाई क्रान्तिकारी जामा पहिराउनु लज्जास्पद विषय हो । वास्तवमा यो उनीहरुको राजनैतिक पलायनबाहेक केही होइन । यसलाई कथित ‘बहुमत’ र कथित ‘क्रान्तिकारी’ जस्ता शब्दले ढाकछोप गरेर पलायनवादी चिन्तनलाई कति दिन लुकाउन सकिएला ?
पार्टीभित्र विचारका आधारमा कारबाही हुँदैन र हुनुहुँदैन । धर्मेन्द्र र सुदर्शनमाथि भएको कारबाही कुनै वैचारिक फरकमतसँग सम्बन्धित थिएन । त्यो अनुशासन, सङ्गठनात्मक पद्धति र विधानसँग सम्बन्धित थियो । किनकी बहस पार्टीको जीवन हो । बहस बिनाको पार्टी द्धन्द्धवादको विरुद्ध छ । धर्मेन्द्र समूहले सार्वजनिक रूपमा पार्टीको घोषित नीति, अनुशासन, पद्धतिका विरुद्ध गएका कारण उनीहरुलाई नेकपाले कारबाही गरेको थियो ।
नेकपा कपिलवस्तुले राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौताविरुद्ध जिल्ला प्रशासन...
प्रतिनिधि सभाकाे बैठक स्थगित, फागुन २ गते बस्ने
एमसीसी पास गर्न देउवा–प्रचण्डको गोप्यपत्र सार्वजनिक, यसप्रति प्रचण्डको...